Trump Oo Yahuudda Usaxiixay Lahaanshiyaha Dhulka Al Jowllaan.
Tuesday March 26, 2019 - 19:24:24 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Hoggaamiyaha dowladda Mareykanka ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in uu dhulka buuralayda Aljowlaan u aqoonsaday dhul ay leedahay Yahuudda sahyuuniyadda.
Munaasabad ka dhacday Aqalka cad ee Mareykanka looga arrimiyo ayuu Trump ku saxiixay wareegto madaxtooyo oo Yahuudda siinaysa mandiqdda Aljowlaan ee dhacda xuduud beenaadka ay wadaagaan suuriya iyo filasdiin.
Hadalka aqoonsiga aljowlaan ee Trump ayaa isbuucii lasoo dhaafay si aad ah loo hadal hayay, hadal kooban oo Trump uu ka hareer jeediyay R/wasaaraha Yahuudda ayuu ku sheegay in haba yaraatee aysan Mareykanku gorgortan ka geli doonin arrinta taageerada Yahuudda.
R/wasaaraha Yahuudda Bin Yamiin Netenyahu oo isna hadlay ayaa sheegay in ay aad ula dhacsanyihiin talaabada uuqaatay madaxweynaha Mareykanka isagoo ku sifeeyay mid taariikhi ah wuxuuna carabaabay in uu yahay madaxweynihii ugu horeeyay ee Washington yeelato oo si hagar la'aaneed utaageera Yahuudda.
Dowladda Mareykanka ayaa sanadda 2018 magaalada Al Qudus u aqoonsatay caasimadda Yahuudda waxayna qaadatay go'aamo uxaglinaya dhanka waxa loogu yeero Israa'iil.